जनताले टेरेनन् भन्दै पुनः लकडाउनको तयारीमा सरकार, यस्तो हुनेछ लकडाउन ! – Life Nepali
जनताले टेरेनन् भन्दै पुनः लकडाउनको तयारीमा सरकार, यस्तो हुनेछ लकडाउन !
काठमाडौ । सरकारले विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानी नअपनाई सर्वसाधारणले हेलचक्र्याइँ गरे पुनः लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिकले सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन गर्ने तयारी गरिएको हो । नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुन्छ *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
सीसीएमसीको शनिबार बसेको बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाका कारण जटिलता र चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले आइतबार कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्धको लडाइँमा काठमाडौंपछि परेको समेत उल्लेख गरे। हरेक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने काठमाडौं महामारीविरुद्धको लडाइँमा भने पछि परेको उनको भनाइ छ। **** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous लगातार बढेर लाख पुगेको सुनको मुल्य, आज सोच्नै नसकिने गरि यस्तो भयो !